कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ? त्यसोभए अपनाउनुस् यो सजिलो घरेलु उपाय, हुनेछ बाक्लो! – Khabaarpati
October 12, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ? त्यसोभए अपनाउनुस् यो सजिलो घरेलु उपाय, हुनेछ बाक्लो!
काठमाडौँ, के तपाई कपाल झर्ने समस्याबाट पिडित हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने हामी तपाईलाई सजिलो घरेलु उपाय बताउँन गइरहेका छौँ । जसले तपाइको कपाललाई छिटो बढ्न मद्दत गर्नुको साथै बाक्लो र आकर्षक बनाउनेछ ।कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ? त्यसोभए अपनाउनुस् यो सजिलो घरेलु उपाय, हुनेछ बाक्लो!
१.घ्यूकुमारी : ४ चम्च घ्यूकुमारीको रसले कपालमा राम्ररी मसाज गनुहोस् । १ घण्टासम्म त्यसै राखेर सफा पानीले पखाल्नुहोस् ।२.नरिवलको तेल : नरिवलको तेलले नियमित रुपमा मसाज गरेर रातभरि त्यसै छोडी बिहान कपाल धुनुहोस् ।३.मेथी : मेथीलाई रातभर भिजाएर बिहान पिस्नुहोस् । एक चम्चा मेथीको धुलोलाई २ चम्चा नरिवलको तेल मिसाइ ३० मिनेटसम्म त्यसै राख्ने र कपाललाई पखाल्ने । यसको लागि प्रयोग हप्तामा ३ पटक सम्म गर्यो भने कपाल झर्ने समस्या बाट छुट्कारा मिल्छ ।
प्याज : प्याजको रसलाई कपालमा मसाज गर्नुहोस् । १५ मिनेट सम्म त्यसै राख्नुहोस् र कपाललाई धुनुहोस् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
हेयर प्याक : २ चम्चा एप्पल सिडार भिनेगारमा १ वटा अण्डा ,आधा कप पानी र २ चम्चा घ्युकुमारीको रसलाई मिसाउनुहोस् । त्यसपछि हेयर प्याकलाई आफ्नो टाउकोमा राम्ररी लगाउनुहोस् । यसलाई ४५ मिनेटको लागि त्यसै छोड्नुहोस् । त्यसपछि कपाल पखाल्नुहोस् । हप्तामा एकपटक यस्को प्रयोग गर्दा कपाल झर्ने समस्याबाट छुट्कारा मिल्नेछ ।